Su'aalaha la isweydiiyo - Kdom
SHARCIYADA KDOM OO AY KU SAABSAN YAHAY MADAXWEYNAHA DADWEYNAHA IYO XUQUUQDA AADANAHA EE QARANKA OO KU SAMEEYSAA MACLUUMAADKA BILAASH AH IYO DUGSIGA AQOONSIGA EE AQOONSIGA EE AQOONSIGA.
Hadafkayagu waa inaan ku siino xulashooyinka ugu wanaagsan ee dhoofinta, meel kasta oo aad ku nooshahay. Maalin kasta, waxaan gaarsiinaa boqolaal macaamiil oo daafaha dunida ah, anagoo hubinayna inaan ku siino heerarka ugu sareeya ee jawaabta adiga marwalba.
Iminka, waan bixinnaa Maraakiibta BILAASH ee Adduunka oo dhan on ugu waxyaabaha bakhaarkayaga yaal.
Waxyaabahayaga la daabacay ayaa la raray DHL!
S: Maxay yihiin Waqtiyada Gaarsiinta ee Amarada Amarkayga?
US, UK, CA, Qiyaasta Waqtiga Gaarsiinta AUS: 12-25 Maalmood (EMS Iyada oo la raacayo Raadinta Goobta)
Qiyaasta Wakhtiga Gaarsiinta: 10-14 maalmood (DHL) Iyada oo la raacayo Raadinta Goobta)
US, UK, CA, Qiyaasta Waqtiga Gaarsiinta AUS: 10-25 Maalmood (EMS Iyada oo la raacayo Raadinta Goobta)
Qiyaasta Wakhtiga Gaarsiinta Caalamiga: 2-4 toddobaad (Kuma Jiro Raadinta Ugu Dambeysa ee U Dambeeya)
Wixii amarro kabo ah oo aan ku soo gaadhin 45 maalmood gudahood marka la dalbado waxay u qalmaan lacag celin ama dib u diris bilaash ah.
S: Goorma ayaan helayaa macluumaad dabagal ah oo ku saabsan Amarkayga?
Amarada Mareykanka ee lambarrada raadraaca waxay qaadan karaan ilaa 7 maalmood kadib amar la soo saaray oo la raacayo xogta raadraaca si loo muujiyo. Hubso inaad isticmaaleyso tirada saxda ah ee raadraaca oo waad la socon kartaa thekdom.com/pages/track-your-order
Wixii amarada caalamiga ah nambarada raadraaca waxay qaadan kartaa 10 maalmood ka dib amar lagu baaraandego si loola socdo xogta si loo muujiyo. Hubso inaad isticmaaleyso nambarka raadraaca saxda ah waadna la socon kartaa thekdom.com/pages/track-your-order. Laguula taliyo, amarada caalamiga ah lama soo celin karo mar la raro mana tusi doonaan xogta geynta meesha la geynayo.
Waxaan ka shaqeynaa DHAMMAAN iibka ayaa ah siyaasada ugu dambeysa. Tan macnaheedu waa inaadan tirtiri karin, soo noqon karin, ama heli karin lacag soocelinta amarka illaa ay khalad uun tahay dhammaadkayaga.
S: kuma faraxsani cabirka kabaha iyo taam ahaanta. Maxaan Sameeyaa?
Jawaab: Fadlan noogu soo dir emailka support@thekdom.com oo noo sheeg waxa dhibku yahay! Waan kaala shaqeyn doonnaa inaan saxno arrinta. Fadlan xusuusnow, kuwani waa shaatiyo daabacan oo caado ah, oo loo sameeyay in lagu dalbado. Markii la daabaco, ma daabici karno ama ku celin karno kaydka. Marka, waxaan isku dayi doonnaa inaan wax ka qabanno si aan u hubinno inaad ku qanacsan tahay iibsigaaga!
S: Waxaad Sameysay Khalad Amarkayga.
A: Aad ayaan uga xunahay. Had iyo goor ma dhacdo, laakiin qofna kama fiicna. Iimayl u dir support@thekdom.com waxaanan kaala shaqeyn doonaa sidii aan sax u saxno. Badanaa, tan waxay si fudud u baahan doontaa inaad noo soo dirto sawir qalad aan sameynay si aan a) u xaqiijin karno sheegashadaada oo b) aan kuugu yeerno si aad u saxdid.
Waxaan haynaa alaabo badan oo alaabooyin ah oo aan ku keydin guryaha. Marka, markii aad dalbatid waxyaabo badan markiiba, waxaa laga yaabaa in si gooni gooni ah loogu raro si ay dhakhso kuugu soo galaan. Waxaa suuragal ah inaad hesho hal shay ka hor kan xiga, marka fadlan ha murugoon haddii aadan walxahaaga hal mar wada qaadan, xusuusnow inay iyagu ku socdaan!